UYIFUMANA NJANI ILAYISENSI YOMTSHATO YASE-HAMPSHIRE ENTSHA KUNYE NOCWANGCISO LOMTSHATO WE-NH - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Ungatshata njani ngokusemthethweni eNew Hampshire kwaye ucwangcise umtshato wakho we-NH
Ungatshata njani ngokusemthethweni eNew Hampshire kwaye ucwangcise umtshato wakho we-NH
INtloko kwiOfisi kaNobhala weDolophu yakho kwaye ufumane loo layisensi yomtshato! URuth Eileen Ukufota Ukuhlaziywa ngoJulayi 27, 2021
I-Granite State inokuba yindawo nje yokubamba umtshato omangalisayo kunye nokubhiyozela. Ekhaya ukuya eNtabeni iWashington, kwiHlathi leSizwe leNtaba eNtshonalanga, kunye neLake Winnipesaukee, iNew Hampshire inikezela ngobuninzi bemisebenzi yangaphandle eConway, eLincoln, eManchester, ePortsmouth nokunye. I-NH ikwabonelela ngegalari zobugcisa, iimyuziyam, indawo zokuthenga, kunye nendawo yokutya ukuba wena neqela lakho nifuna ukuthatha ikhefu phakathi kokunyuka kunye ucwangciso lomtshato .
Ngaphambi kokuba ucwangcise eyakho Umtshato we-NH kwigumbi lokungenisa izihambi elinomtsalane okanye indawo yokuphumla ephezulu ekufutshane okanye kude ne iintaba , wena kunye nezinye zakho ezibalulekileyo kufuneka nifumane iNew Hampshire iphepha lomtshato . Isibini sinokufaka isicelo sesiqinisekiso somtshato sase-New Hampshire kuyo nayiphina i-Ofisi yoMabhalane wasedolophini. Isicelo selayisensi yomtshato siqonde kwaye sifuna amaxwebhu amancinci, kodwa kusafuneka ujonge kulungiselelo lokuqala. Ukuqala, jonga iiwebhusayithi zikarhulumente eziyimfuneko, yiya kwii-FAQs, kwaye ufunde apha ukuze uve iingcebiso kunye namacebo okuhamba kwinkqubo yelayisensi yomtshato ye-NH.
Igumbi lokulala eliphefumlelweyo laseParis
Ungatshata njani eNew Hampshire
Ngaba likho ixesha lokulinda ukutshata eNew Hampshire?
Umbuso waseNew Hampshire awusafuni xesha lokulinda emva kokukhutshwa kwelayisensi yakho yomtshato, oko kuthetha ukuba ungatshata kwangolo suku lunye xa ufumana isatifikethi. Iilayisensi zomtshato ze-NH zisebenza kuphela kwiintsuku ezingama-90 emva kokukhutshwa kwesatifikethi.
Zithini iimfuno zomthetho zokutshata eNew Hampshire?
Phantsi komgaqo-siseko waseNew Hampshire, umtshato ngumanyano lwaseburhulumenteni phakathi abantu ababini . Ukuba ungaphantsi kweminyaka eli-18, nxibelelana nonobhala wesixeko ngolwazi oluthe kratya malunga nokufumana isatifikethi somtshato, Ngelixa i-NH yamkela umtshato wesini esifanayo kwizibini ezingaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala, abantu abangaphantsi kwale minyaka abanakho ukufumana ilayisensi esemthethweni yomtshato. ukuya kwesinye isini esifanayo.
INew Hampshire ayifuni ukuba ufake isicelo semvume yokutshata kwidolophu yakho okanye kwisixeko esihlala kuso, okanye apho uceba ukwenza umsitho womtshato. Oku kusebenza kubo bobabini abahlali bakarhulumente kunye nabangengabo abahlali be-NH. Emva kokufumana ilayisenisi yomtshato, uya kuba nakho ukutshata kuyo nayiphi na idolophu okanye isixeko esikwiphondo laseNew Hampshire.
Yintoni ethathwa njengomtshato womtshato oqhelekileyo eNew Hampshire?
INew Hampshire ayiwamkeli umtshato oqhelekileyo njengomtshato womthetho.
Ngubani onokukutshata eNew Hampshire?
INew Hampshire ifuna igosa eligunyazisiweyo ukuba lenze umsitho womtshato. Anumphathiunokuba lilungu labefundisi, iJustice of the Peace, okanye umntu oqinisekisiweyo ukwenza umsitho.
Iphepha-mvume lomtshato laseNew Hampshire 101
Yintoni oyifunayo ukuze ufumane iLayisensi yoMtshato eNew Hampshire?
Omabini la maqela kufuneka eze namaxwebhu asemthethweni kwi-Ofisi yoMabhalane weDolophu. Ukuba akukho namnye kuni okanye kwi-S.O yakho. ubukade utshatile ngaphambili, uyakufuna kuphela uxwebhu ukubonisa ubungqina bakho kunye nobudala, njengephepha-mvume lokuqhuba elisebenzayo, i-ID yokungaqhubi, okanye ipaspoti. Ukuba omnye wenu wayekhe watshata ngaphambili, kuza kufuneka nize nekopi eqinisekisiweyo ebonisa ukuba umtshato uphelile. Olu xwebhu lunokuba sisatifikethi sokusweleka ukuba iqabane liswelekile, okanye uqhawulo mtshato wokugqibela okanye isigqibo sokurhoxisa.
Ngelixa ubungqina beminyaka yobudala kunye nencwadi yesazisi inokuba yiyo kuphela into oyakuyifuna, wena ne-S. kufuneka ikulungele ukubonelela ngolu lwazi lulandelayo ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo:
Inombolo Yokhuseleko Loluntu (ukuba iyafumaneka)
Igama elipheleleyo lootata kunye nemeko yokuzalwa
Igama lomama elipheleleyo lobuntombi kunye nemeko yokuzalwa
Ixabisa ntoni iLayisensi yoMtshato waseNew Hampshire?
Ukongeza kwisazisi sefoto kunye noqhawulo mtshato okanye umthetho wokuyekisa (ukuba kufanelekile), intlawulo yelayisensi eyi- $ 50 iyafuneka ukufumana isatifikethi somtshato kwiphondo laseNew Hampshire. Umrhumo umiselwe yi-RSA 457. Ungayihlawula imali ezinkozo okanye nge-debit kunye / okanye ngekhadi letyala; Awunakho ukuhlawula ngetsheki.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ilayisensi yomtshato eNew Hampshire?
Kuya kuthatha malunga nemizuzu engamashumi amathathu ukugqiba inkqubo yesiqinisekiso somtshato, ke qiniseka ukuba ujonga iiyure kwi-ofisi kanobhala wenkundla.
Ngaba ungasifaka isicelo seLayisensi yoMtshato kwi-Intanethi eNew Hampshire?
Njengoko kukhankanyiwe, omabini la maqela kufuneka abekhona kwi-Ofisi yoMabhalane weedolophu ukuze afumane isatifiketi somtshato, ngaphandle kokuba wena kunye / okanye u-S. basemkhosini kwaye abanakubuyela kurhulumente ngaphambi komtshato. Ukuba kunjalo, qhagamshelana ne-Ofisi kaNobhala weSixeko ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe.
Ufumana njani ikopi yelayisensi yakho entsha yomtshato waseHampshire?
Emva kokukhutshwa kwelayisensi yakho yomtshato kunye nomsitho womtshato owuphathisiweyo, wena neqabane lakho ningenza ikopi eqinisekisiweyo yesatifikethi sakho kwiofisi kamabhalana. Ikopi yokuqala ixabisa i-15 yeedola kwaye zonke iikopi eziqinisekisiweyo ziyi- $ 10.
Ungalitshintsha njani igama lakho eNew Hampshire
Uyakwazi ukubonisa igama olithandayo kwilayisenisi yakho yomtshato, kodwa ukuba eli nyathelo alenzeki ungenza isicelo sokutshintsha igama le-NH. Inkqubo yokutshintsha igama inokubandakanya umyalelo wenkundla kunye / okanye ukutyelela iOfisi yoKhuseleko loMbutho kunye neSebe leZithuthi.
Uyicwangcisa njani i-New Hampshire Wedding
Ugqithile kwinkqubo yesicelo selayisensi yomtshato kwaye uphume kwelinye icala! Ngoku lixesha lokucwangcisa umsitho womtshato kunye nolwamkelo lomtshato!
Izixeko ezahlukileyo kunye neeNdawo zokuThathela ingqalelo uMtshato oMtsha waseHampshire
Ngelixa i-NH ingaphantsi kweekhilomitha ezingama-20 zonxweme, ekubhekiswa kuyo njengonxweme lweAtlantic, umtshato waselwandle usenokwenzeka. Ukuba le vibe yakho, cinga ukucwangcisa umtshato wakho eHolton, idolophu entle eselunxwemeni enamabhishi athandwayo. Kodwa kwakhona, lumka ngexesha labakhenkethi!
Ukuba amachibi anomdla ngakumbi, iNew Hampshire ngokuqinisekileyo ngurhulumente wakho. Ngapha koko, uMmandla waMachibi e-NH uthathwa njengeligugu leNew England. Ngaphakathi kwedolophu yaseMoultonborough, ungandwendwela iLake Winnepesaukee, iSquam Lake kunye neLake Kanasatka kwaye ufumane iindawo kwiidolophu ezikufutshane.
INew Hampshire iphelile Iipaki zikarhulumente ezingama-90 inokuba yindawo ekuyiwa kuyo okanye umsebenzi wosuku lweendwendwe zakho. Kodwa ukuba ukhetha umtshato ofana nesixeko, cinga iPortsmouth, iManchester, okanye iNashua, njengoko ezi zindawo zidumileyo zingasayi kuphoxeka.
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo kwindawo yaseNew Hampshire
Umbuso waseNew Hampshire uneehotele ezitofotofo kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezikhoyo onokukhetha kuzo, kunye neendawo zokungenisa iiholide zohlobo lwaseNew England kunye Oovimba beRustic . Ukuba ujonge indawo kwindawo ethile phakathi kwezi zimbini, iihotele ezingasemanzini kwizixeko ezikhulu zinamagumbi okufundela kunye neeholo ezinkulu ukwanelisa ubungakanani beqela ngalinye.
Ungabafumana njani abathengisi boMtshato baseHampshire abatsha
Ngelixa ezinye iindawo zinokunikezela ngezibonelelo ezithile, njengokutya, unokukhetha ukulandela abathengisi abongezelelweyo kumtshato wakho waseNew Hampshire, ngakumbi abapheki.
Kulungile, ewe i-New Hampshire ise-New England kwaye ke ngoko ifumene ukutya kwayo kwaselwandle, kodwa xa isiza kuwo: I-NH imalunga nokutya okuthuthuzelayo. Kulungile, isiraphu emnandi yemephu, i-cider (ekhutshelwe loo 21+), kunye neepie zethanga ezithandekayo kwikamva lakho ukuba iphupha lakho ngumtshato we-NH. Phuma nendala, ngaphakathi entsha: kule meko ikhekhe kunye neepie ngokulandelelana.
AmaXesha aBalaseleyo oNyaka ukuba abe noMtshato oMtsha waseHampshire weMozulu elungileyo
Umbuso waseNew Hampshire waziwa ngokuba ngamagqabi awo awayo ukuwa kwemitshato ithandwa kakhulu. Ingaba ujonga ukutshintsha kwamagqabi kwidrive yakho kwindawo yomtshato, okanye ubandakanye imibala yokuwa ngomtshato ongaphandle, ukwamkela ukuwa kweNew England kunokuba yindlela yokuya kumtshato waseNew Hampshire. Oku akuthethi, ewe, ukuba ihlobo lasekuqaleni kunye nokuphela kwentwasahlobo azikho amaxesha athandwayo okutshata eNew Hampshire, ngokunjalo.
Akukho mininzi imiqobo yokutsiba ngaphezulu ngelixa ufumana iphepha-mvume lakho lomtshato le-NH. Ukungathethi, umvuzo sisiqwenga esimnandi sepayi eyenziwe ekhaya.
izipho ezintle zokumkhumbula
Iziqithi zasecayman zonke iiholide zekrisimesi
imenyu yomtshato izimvo kwisitayile se-buffet
umtshato crasher nqanaba 5 ekliniki
izimvo zetheko lama-50 lomtshato
Izimvo zesipho sikamamazala
uyithumela nini ukugcina imihla